May 2019 – Media9
ဆယ်လီ ရုပ်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
May 31, 2019 May 31, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံများအတွက် “ပြဿနာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမိသားစုအလှူ ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်တဲ့ ဦးဇာဂနာ ၊ ကိုနေတိုးတို့ရဲ့ စကားသံများ… [Zawgyi] ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံမ်ားအတြက္ “ျပႆနာ” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမိသားစုအလႉ ဇာတ္ကားႀကီးမွာပါဝင္တဲ့ ဦးဇာဂနာ ၊ ကိုေနတိုးတို႔ရဲ႕ စကားသံမ်ား…
ဆယ်လီ ရုပ်ရှင် အမေးအဖြေ
သူတို့စုံတွဲ Ro မ Ro မသိဘူး မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာနဲ့ သူ့မိန်းမကိုကြွားတာပဲ “ ရဲရင့်အောင် “
May 29, 2019 May 29, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] သူတို့စုံတွဲ Ro မ Ro မသိဘူး မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာနဲ့ သူ့မိန်းမကိုကြွားတာပဲ “ ရဲရင့်အောင် “ သူငယ်ချင်းရွှေထူးရဲ့ ဇာတ်ကားကိုလာကြည့်ရင်း ရွှေထူးကြွားကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မိဘချင်းသဘောတူထားပြီဖြစ်တဲ့ ရဲရင့်အောင် နဲ့ ဧငြိမ်းဖြူရဲ့ ချစ်ခြင်းအကြောင်း… [Zawgyi] သူတို႔စံုတြဲ Ro မ Ro မသိဘူး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔တာနဲ႔ သူ႔မိန္းမကိုၾကြားတာပဲ “ ရဲရင့္ေအာင္ “ သူငယ္ခ်င္းေရႊထူးရဲ႕ ဇာတ္ကားကိုလာၾကည့္ရင္း ေရႊထူးၾကြားေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ မိဘခ်င္းသေဘာတူထားျပီျဖစ္တဲ့ ရဲရင့္ေအာင္ နဲ႔ ဧျငိမ္းျဖဴရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း…
ပိုင်တံခွန်နဲ့ ယွန်းယွန်း ဘယ်သူက အသက်ပိုကြီးလဲ … ?…
May 29, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ပိုင်တံခွန်နဲ့ ယွန်းယွန်း ဘယ်သူက အသက်ပိုကြီးလဲ … ? ယောကျ်ားလေးတွေက ဆံပင်ရှည်နဲ့ကောင်မလေးဆို သဘောကျတယ် “ ပိုင်တံခွန် “ [Zawgyi] ပိုင္တံခြန္နဲ႕ ယြန္းယြန္း ဘယ္သူက အသက္ပိုၾကီးလဲ … ? ေယာက်္ားေလးေတြက ဆံပင္ရွည္နဲ႔ေကာင္မေလးဆို သေဘာက်တယ္ “ ပိုင္တံခြန္ “
May 27, 2019 March 23, 2020 media9Comment(0)
[Unicode] ဘာပြောပြောရှင့်သဘောပဲ ဒီလို သဘောကောင်းတဲ့ မိန်းမမျိုးရထားတာ တော်ရုံကုသိုလ်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူး။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း ကိုအခြေခံရိုက်ကူးသည် သရုပ်ဆောင် – မိုးသောက် ၊ဝမ်းဝမ်း ကင်မရာ -အာကာဟိန်း တည်းဖြတ်နှင့်ဒါရိုက်တာ – အောင်လင်းနိုင် Media9မှရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါသည်။ Laugh/Like/Share [Zawgyi] ဘာေျပာေျပာရွင့္သေဘာပဲ ဒီလို သေဘာေကာင္းတဲ့ မိန္းမမ်ိဳးရထားတာ ေတာ္ရံုကုသိုလ္နဲ့ေတာ့မရနိုင္ဘူး။ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္း ကိုအေျခခံရိုက္ကူးသည္ သရုပ္ေဆာင္ – မိုးေသာက္ ၊၀မ္း၀မ္း ကင္မရာ -အာကာဟိန္း တည္းျဖတ္ႏွင့္ဒါရိုက္တာ – ေအာင္လင္းနိုင္ Media9မွရိုက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ Laugh/Like/Share
May 15, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] သမီးရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်က ယဉ်ကျေးလိမ္မာ၊သိမ်မွေ့တဲ့သူဖြစ်ရင်ကျေနပ်ပြီ။ကျန်တာသမီးအပိုင်းပဲ… ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူမရှိလို့နေမှာပေါ့နော်။ဘယ်သူမှလာမပြောကြဘူး… ဖိုက်တင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့ ယဉ်လက် နှင့် ဖခင်ဦးသန်းအောင် တို့ရဲ့ Exclusive Interview အပိုင်း-(၂) [Zawgyi] သမီးရဲ႕ဘဝလက္တြဲေဖာ္က ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊သိမ္ေမြ႕တဲ့သူျဖစ္ရင္ေက်နပ္ျပီ။က်န္တာသမီးအပိုင္းပဲ… ကိုယ့္ကိုခ်စ္တဲ့သူမရွိလို႔ေနမွာေပါ့ေနာ္။ဘယ္သူမွလာမေျပာၾကဘူး… ဖိုက္တင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ယဥ္လက္ ႏွင့္ ဖခင္ဦးသန္းေအာင္ တို႔ရဲ႕ Exclusive Interview အပိုင္း-(၂)
May 14, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ဖိုက်တင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့ ယဉ်လက် နှင့် ဖခင်ဦးသန်းအောင် တို့ရဲ့ Exclusive Interview အပိုင်း-(၁) [Zawgyi] ဖိုက္တင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ယဥ္လက္ ႏွင့္ ဖခင္ဦးသန္းေအာင္ တို႔ရဲ႕ Exclusive Interview အပိုင္း-(၁)
ဂီတ အနုပညာ အမေးအဖြေ
[Unicode] တေးသံရှင် သားလင်း ရဲ့” အားသစ်တွေနဲ့”တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးသစ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ နဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၁၃.၅.၂၀၁၉ တွင် Orchid Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ “အားသစ်တွေနဲ့” တေးစီးရီး ကို The Sun Music ကနေ ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပြီး Faith Music Band က တီးခတ်ပေးထားကာ တေးရေးအဖြစ် Daniel Saw ၊ August ၊ K ၊ Aaron ၊ နိုင်ဦး ၊ သားလင်း ၊ ဝင်းဖြိုး တို့က ရေးစပ်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ [Zawgyi] ေတးသံရွင္ သားလင္း ရဲ႕” အားသစ္ေတြနဲ႔”တစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးစီးရီးသစ္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ နဲ႔ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ၁၃.၅.၂၀၁၉ […]
May 11, 2019 May 11, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] Manchester United Fan တွေ စိတ်မဆိုးကြေးနော် .. ဘောလုံး Troll ထားတဲ့ ဗီဒီယို လေးပါ ..မန်ယူပရိတ်သတ်တွေကို နောက်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တခြားဖန်တွေကိုပါ Troll လုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ မန်ယူဖန်တွေ ခဏ သည်းခံပြီးစောင့်ပေးကြပါဦးလို့ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ဦးကို လည်းကောင်းထိခိုက် နစ်နာစေလိုခြင်းမရှိသဖြင့် ဟာသ ရှုဒေါင့်မှသာကြည့်ရှု့ကြပါရန် .. အခု လို ဟာသ ဇာတ်လမ်းတို လေးတွေ အင်တာ ဗျူးတွေ Celebrity News တွေ မပြတ်ကြည့် ချင်တယ်ဆိုရင် တော့ ကျ နော် တို့ Media9ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook Page ကို လည်း […]
May 10, 2019 May 10, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] “မင်းသိင်္ခဝတ္ထုတွေက သူများတွေနဲ့မတူဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တဲ့ အရေးအသားထဲမှာပါတယ်။Super nautral ဘက်ရောက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပိုဖတ်ဖြစ်တယ်”ဆိုတဲ့ “ဆားပုလင်းနှင်းမောင် နှင့် စနေမောင်မောင်”ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ နိုင်နိုင်း၊ဒေါင်း တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်မယ့် အောင်မြင့်မြတ် [Zawgyi] “မင္းသိခၤဝတၳဳေတြက သူမ်ားေတြနဲ႔မတူဘူး။ကၽြန္ေတာ္တကယ္ၾကိဳက္တဲ့ အေရးအသားထဲမွာပါတယ္။Super nautral ဘက္ေရာက္တယ္။အဲဒါေၾကာင့္ပိုဖတ္ျဖစ္တယ္”ဆိုတဲ့ “ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ ႏွင့္ စေနေမာင္ေမာင္”ရုပ္ရွင္ကားၾကီးမွာ ႏုိင္ႏိုင္း၊ေဒါင္း တို႔နဲ့အတူ သရုပ္ေဆာင္မယ့္ ေအာင္ျမင့္ျမတ္
ဂီတ ဆယ်လီ အနုပညာ အမေးအဖြေ
သင်္ကြန်မှာ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ စိုးရိမ်နေကြတဲ့အပေါ် ရှင်းပြခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
May 10, 2019 May 14, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] “၂၀၀၅ လောက်ကတည်းက မန္တလေးမှာသြင်္ကန်သီချင်းတွေဆိုရင်း စခဲ့တာဆိုတော့ သြင်္ကန်မှာမဆိုခဲ့ရတဲ့နှစ်မရှိဘူး။၁၀နှစ်၊၁၅နှစ်လောက် အနည်းဆုံးရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲဒီလိုဆိုတော့ မဆိုပဲနဲ့ သိပ်ပြီးမနေတတ်တော့ဘူး။ဗိုက်ကြီးမှ သီချင်းမဆိုရတော့ဘူးဆိုတာမျိုး မလိုချင်ဘူး။သူများတွေချဉ်ခြင်းတက်သလို…သီချင်းဆိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်”ဆိုတဲ့ သြင်္ကန်မှာ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ စိုးရိမ်နေကြတဲ့အပေါ် ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် [Zawgyi] “၂၀၀၅ ေလာက္ကတည္းက မႏၱေလးမွာသၾကၤန္သီခ်င္းေတြဆိုရင္း စခဲ့တာဆိုေတာ့ သၾကၤန္မွာမဆိုခဲ့ရတဲ့ႏွစ္မရွိဘူး။၁၀ႏွစ္၊၁၅ႏွစ္ေလာက္ အနည္းဆံုးရွိေနျပီေပါ့ေနာ္။အဲဒီလိုဆိုေတာ့ မဆိုပဲနဲ႔ သိပ္ျပီးမေနတတ္ေတာ့ဘူး။ဗိုက္ၾကီးမွ သီခ်င္းမဆိုရေတာ့ဘူးဆိုတာမ်ိဳး မလိုခ်င္ဘူး။သူမ်ားေတြခ်ဥ္ျခင္းတက္သလို…သီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့စိတ္ေပါ့ေနာ္”ဆိုတဲ့ သၾကၤန္မွာ ကိုယ္ဝန္ၾကီးနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြလုပ္ခဲ့လို႔ စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့အေပၚ ရွင္းျပသြားခဲ့တဲ့ စႏၵီျမင့္လြင္